मोदी हिँड्ने बाटोमा तारको लठारो व्यवस्थापन सुरु -
Home›देश›मोदी हिँड्ने बाटोमा तारको लठारो व्यवस्थापन सुरु
मोदी हिँड्ने बाटोमा तारको लठारो व्यवस्थापन सुरु
गत २८ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौं आउनुअघि चावहिलमा रातारात सडक कालोपत्रे गरियो । कारण थियो– मोदी एयरपोर्टबाट चावहिल हुँदै चुच्चेपाटीपिस्थत होटेल हायात पुगेर बस्ने योजना ।
अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै झल्को दिने गरी भीआईपीहरु ओहोर–दोहोर गर्ने काठमाडौंको एउटा रुटमा तार व्यवस्थापनको काम सुरु भएको छ । कामको संयोग के परेको छ भने यसपालि पनि मोदी काठमाडौं आउँदैछन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा सडकमा यत्रतत्र लत्रिएका तारलाई मिलाउने र बाँध्ने काम भइरहेको छ ।
बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका राष्ट्रहरुको प्रयास बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन यही भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुँदैछ । सम्मेलनमा भाग लिन बिमस्टेक सदस्य रहेका ६ देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख काठमाडौं आउनेछन् । उनीहरु त्रिभुवन विमानस्थलबाट ताहाचलस्थित सोल्टी होटेलसम्मको रुटमा ओहोर–दोहोर गर्नेछन् । त्यसैले सरकारको निर्देशनमा यही रुटमा बिजुलीका पोलमा लत्रिएका तार मिलाउन थालिएको हो ।
कुन रुटमा कसले मिलाउँदैछ तार ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार एयरपोर्टदेखि गौशाला चोकसम्मको रुटमा तार व्यवस्थापनको जिम्मा ईन्टरनेट सेवा प्रदायक वेबसर्फर र स्काई केबललाई दिइएको छ ।
यस्तै गौशाला चोकदेखि चावहिलसम्म सुबिसु, चावहिलदेखि होटेल हायातसम्म आईटेल र स्पेसटाईम, तीनकुनेदेखि बानेश्वरसम्म मर्कान्टाइल र ब्रोडलिंकले तार मिलाउने जिम्मा पाएका छन् ।
त्यसैगरी बानेश्वरदेखि माईतीघर मण्डलासम्म क्लासिकटेक, माईतीघरदेखि थापाथलीसम्म वेब केबलले तार व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको छ भने थापाथली पुलदेखि टेकु पुलसम्म हिमालय अनलाईन र टेकु पुलदेखि सोल्टी होटेलसम्मको रुटमा भायोनेटलाई तार व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
यसमा टेलिकम र प्राधिकरणले पनि सहजीकरण र व्यवस्थापनको काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । तर, यी रुटबाहेक अन्य क्षेत्रमा तार व्यवस्थापनमा भने सरोकारवाला निकायको ध्यान छैन । किनभने त्यहाँ विदेशी पाहुनाको आवत जावत हुनेछैन ।
लाज ढाक्न सधैं टालटुले काम
विदेशी पाहुना आउँदा मात्रै कुरुप सहरको सजावटमा जुट्ने सरकारी रवैया पुरानै हो । सडकमा असरल्ल र बिजुलीका पोलमा अव्यवस्थित तारले दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको छ । बिजुलीको पोलले भारनै थेग्न नसक्ने तारको लठारो बोकिरहेको छ ।
सडकमा हिँड्दा हिँड्दै तारको लठारो खसेर मान्छे ढाल्ने स्थिति छ । विद्युतका पोलमा टेलिफोन, केवल अपरेटर, ईन्टरनेट सेवा प्रदायक लगायतका कम्पनीका तारको गन्जागोलले काठमाडौं सहरको सुन्दरता समेत कुरुप बनाएको छ ।
विदेशी पाहुनाका आँखालाई केहीबेर भ्रममा राखेर लाज ढाक्न सरकारले गर्ने टालटुले कामप्रति जनमानसले व्यंग्य गर्दै आएका छन् । देशकै राजधानीसमेत रहेको काठमाडौंको सुन्दरता बचाउन पनि तार व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका सहप्रवक्ता नमराज ढकाल महानगरलाई सुन्दर देखाउन तार व्यवस्थापनको काम जरुरी रहेको बताउँछन् । उनले सबैभन्दा पहिले तीनकुने–माईतीघर रुटमा बिजुलीका पोलमा रहेका तारलाई भूमिगत गर्ने पुरानै योजना सुनाए ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल पनि तार भूमिगत गर्नेबारे योजना बनिरहेको सुनाउँछन् । तर, यो योजनाले अहिलेसम्म गति लिन भने सकेको छैन ।
पहिरोले डोल्पामा दुई घर पुरिए
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको विभूषण खोसियो !
निर्मला पन्त हत्या छानबिन समितिमा फर्किए उपसचिव केसी
सभापति देउवाको भनाइ कसरी आयो म अचम्मित छु : डा. शेखर कोइराला
प्रेस चौतारी इञ्चार्जको जिम्मेवारी हस्तान्तरण
नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम छिट्टै सिफारिस हुन्छः प्रचण्ड
भक्तपुर इन्काउन्टरबारे छानबिन गर्ने गृहमन्त्रालयको तयारी
डडेल्धुराका ग्रामीण क्षेत्रका सेवाग्राही ८० रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न झन्डै एक हजार रुपैयाँ खर्च
प्रशासन अस्थिर : ओली नेतृत्वको सरकारका तीन वर्ष